'समृद्ध प्रदेश बनाउँछौं' - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»अन्तरवार्ता»‘समृद्ध प्रदेश बनाउँछौं’
‘समृद्ध प्रदेश बनाउँछौं’
By Ramailoo Nepal on	 February 19, 2018 अन्तरवार्ता
एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीका रूपमा निश्चित भएको केही महिना भयो। अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि नेता छनोट गर्दै गर्दा उनी प्रदेश नम्बर ५ लाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा योजना बुन्दै थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएको अर्को दिन पदभार ग्रहणलगत्तै उनले लामै योजनाको खाका सुनाए। समग्र प्रदेशको विकास र अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सकिने आधार र चुतौतीका विषमा रहेर अन्नपूर्णकर्मी लक्ष्मण पोखरेलले तयार पारेको कुराकानी :
सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभएको छ। पूर्णरूपमा सरकार विस्तार कहिलेसम्म हुन्छ ?
हामी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जुटेका छौं। मन्त्रालयका लागि आवश्यक संरचना निर्माण हुनासाथ मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम पूरा हुनेछ।
प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू केकस्ता छन् ?
संघीय संविधानपछि ऐतिहासिक प्रदेश सरकार गठन गर्न सफल भएका छौं। जनताका आवश्यकता र विकासको आकांक्षालाई प्रदेश सरकारका मध्यमबाट पूरा गर्ने यो महत्वपूर्ण चरणमा हामी छौं। जनताका आकांक्षाअनुसार समृद्ध प्रदेश निर्माणमा जुट्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्छु। पहिलो प्राथमिकतामा कानुन निर्माण रहेको छ। त्यसले ५ नम्बर प्रदेश आफ्नो मिसनमा बढेको छ भन्ने सन्देश जानेछ भन्ने म ठान्छु। त्यसपछि हामी पाँच नम्बर प्रदेश कस्तो छ भन्ने श्वेतपत्र (ह्वाइट पेपर) जारी गर्छाैं। ताकि हामी आउँदा के थियो ? पाँच वर्षमा के गर्‍यौं ? के छोडेर जाँदैैछौं ? भन्ने तुलना गर्न सकियोस्। प्रदेशको वास्तविक स्थिति चित्र बनाउँछौैं, जुन हामीलाई अघि बढ्नका लागि मार्गदर्शक हुन्छ।
मुख्यमन्त्री भएसँगै नमुना प्रदेश बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यसभित्र पर्ने विकासका खाकाहरू केके हुन् ?
रूपन्देहीदेखि बाँकेसम्मको क्षेत्र औद्योगिक नगरीका रूपमा पनि चिनिन्छ। उद्योगको विकासमा प्रदेश सरकारका योजना र प्राथमिकता केकस्ता हुन्छन्?
मुख्यमन्त्रीका रूपमा समृद्ध प्रदेश निर्माणको थालनीमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
स्थायी राजधानीको मुद्दा बढी पेचिलो गरी देखिएको छ। त्यसको सही छनोट र व्यवस्थापनका उपाय के हुन् ?
हामीले प्रदेश राजधानी नभए पछि परिन्छ भन्ने सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। राजधानी भनेको सबैको पायक पर्ने, सहज तथा व्यवस्थित सहर भएको क्षेत्र बनाउने चुनौती छ। स्थायी राजधानी पछिल्लो पुस्ताले पनि गर्व गर्नलायक सहरका रूपमा चिनिने गरी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ। तीनवटा मेगासिटीमार्फत प्रदेशको समृद्धिको सपना देखेका छौैं, जसले राजधानीकै विकास र सुविधाको अनुभूति गराउनेछ। भारतमा दिल्ली, कलकत्ता र मुम्बई हुन सक्छन् भने हाम्रो प्रदेशमा पनि तीन महानगर बन्न सक्छन्।
बुटवल-भैरहवा, घोराही-तुल्सीपुर, कोहलपुर-नेपालगन्जलाई महानगरको रूपमा विकास गरिनेछ। गाउँपालिका केन्द्रहरू आफ्नै प्रकृतिका ग्रामीण सहरका रूपमा विकास हुनेछन्, जसले जनतालाई आफ्नै क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ।